ဦးဇော်: ဆရာဘယ်လို ရွေးမလဲ
“ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်မရှိကြရင် အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလည်း ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ခံရမယ်။”
"If you don't have enough intelligence you will probably be exposed to religious fame even in such clean and clear religion as Buddhism."
ဆရာတော်ရဲ့ မိန့်ဆိုချက်ဟာ အင်မတန်မှ လေးနက်ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အကောင်းဆုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အမြင့်မြတ်ဆုံး အမှန်ဆုံးလို့ မကြွေးကြော်ပဲ ပုထုစဉ်မှန်သမျှ မှားတတ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်ထင်ကိုယ့်အမြင်နဲ့ သာသနာ ပြုသလို သာသနာကို ဖျက်စီးနေတတ်သူတွေလည်းရှိကြောင်း၊ လေ့လာလိုက်စားမူနည်းလို့ ကျင့်ကြံမူနည်းလို့ အယူအစ အတွေးအခေါ်တွေမှားယွင်းမူတွေဖြစ်တတ်ပြီး နည်းမှားတွေကို လမ်းညွှန်းတတ်သူတွေရှိကြောင်း၊ စေတနာ သဒ္ဒါ တရားလွန်ပြီး ပြောမှားဆိုမှားတွေ ဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ တချို့က ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို လိုလား၍ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံပြီး တမင်တကာ ဝင်ရောက်ဖျက်စီးတတ်သူတွေရှိတတ်ကြောင်းကို တိုတိုနဲ့ လိုရင်းရောက်အောင် ပြောဆိုသွားတဲ့ အဆုံးအမလေးပါ။
အဓိကတော့ စိစစ် လက်ခံဖို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဂျပန် ပညာရှိတစ်ဦးပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲ
" တရားဟောသူထက် တရားနာသူ က ပိုပြီး စိစစ်တတ်ရမယ်။ "
တရားနာသူက ပိုပြီး စိစစ်ရမှာပါ၊ ဆရာဝန်နဲ့ လူနာမှာဆို လူနာက ပေးတဲ့ ဆေးတိုင်းသောက်ရင် သေယုံပဲရှိတယ်လေ။ ဆရာဝန်တော့ သူသိသူတတ်ပဲလုပ်မှာပေါ့ သောက်သုံးရမှာက လူနာလေ၊ အဲ့တော့ လူနာက သေသေချာချာ စဉ်းစား စိစစ်ရမှာပေါ့။ ဒါက ဥပမာပါ။
မြတ်စွာဘုရားလည်း အမြင့်မြတ်ဆုံး ဩဝါဒတစ်ခုကလည်း စိစစ်ပြီးလက်ခံဖို့ကို ပြောထားတယ် - ဒါကို လေးလေးနက်နက်ထားပြီး မှတ်သားသင့်တဲ့ တရားတော်လေးပါ။
" ဗျာဒိတ်စကား ဆိုရုံနဲ့ မယုံကြည်ပါနှင့် အစဉ်အဆက် ယုံကြည်လက်ခံလာတာ ဖြစ်ရုံနှင့် မယုံကြည်ပါနှင့်။ သတင်းကြားနဲ့လဲ မယုံကြည်ပါနှင့် မြင့်မြတ်တဲ့ ကျမ်းစာများမှာ ပါရုံနဲ့လဲ မယုံကြည်ပါနှင့်
တဆင့် စကားမျှနှင့်လဲ မယုံကြည်ပါနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ရေး တက္ကဗေဒ၊ ဒဿနိကဗေဒတွေနဲ့ ကိုက်ညီရုံမျှနှင့်လဲ မယုံကြည်ပါနှင့်
ပြောတဲ့လူက ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရုံမျှနှင့်လဲ
မယုံကြည်ပါနှင့် မိမိဆရာ ဖြစ်ရုံမျှနှင့်လဲ မယုံကြည်ပါနှင့် သင်ကိုယ်တိုင် ကောင်းတဲ့အရာပဲ၊ အပြစ်ကင်းတဲ့ အရာပဲ၊ ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ အရာပဲ၊ လက်တွေ့ ကျင့်ကြည့်တဲ့ အခါမှာလဲ မုချ ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ အရာပဲလို့ ကိုယ်တွေ့ သိမြင်ရတဲ့ အခါကျမှပဲ အဲဒါကို ယုံကြည် လက်ခံ လိုက်နာ ကျင့်ကြံပါ။ "
ဒီတော့ ဆရာကောင်းကို ဘယ်လိုရှာရမှာလည်း၊ ဘာသာကောင်းကို ဘယ်လိုရှာရမှာလည်းဆိုတော့ ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာ အသိအလင်းဖော်ပြထားတယ်။
ဆရာကောင်း၏ လက္ခဏာ (၇)ချက်
(၁) ရိုသေထိုက်သောဂုဏ် (၄)ပါး ရှိရမည်၊
(၂) ချစ်ခင်ထိုက်သောဂုဏ် (၄)ပါး ရှိရမည်၊
(၃) ချီးမွမ်းထိုက်သောဂုဏ် (၄)ပါး ရှိရမည်
(၄) မိမိ၏လွဲမှားမှု၊ မိုက်မဲမှုများကို ဆုံးမနိုင်ရမည်၊
(၅) မိမိမေးသမျှကို ဖြေဆိုနိုင်ရမည်၊
(၆) နက်နဲသော ဓာတ်၊ ပရမတ်၊ သစ္စာတရားများကို ဟောကြားနိုင်ရမည်၊
(၇) အကျိုးနည်းသော အလုပ်များကိုတားမြစ်၍ အကျိုးရှိသောအလုပ်များကို ညွှန်ပြနိုင်ရမည်၊
အဲ့ဒီ့အချက် (၇)ချက်မှာ ပထမဆုံးသုံးချက်ဟာ အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းတို့မှာ
(၁) ဒါန - လောဘမကြီးပဲ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်၊
(၂) ဝေယျဝဇ္ဇ - ဒေါသမကြီးဘဲ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သည့် ချစ်ဖွယ်စကား ရှိရမည်၊
(၃) အတ္တစရိယာ - တပည့်တို့၏ ကောင်းကျိုးကို ကျင့်ဆောင်ရမည်၊
(၄) သမာနတ္တတာ - မနှိမ့်ချဘဲ ပုံမှန်တန်းတူ ဆက်ဆံရမည် ဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
( သတ္တတအင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိတော် )
နောက်တချက်က ဆရာတစ်ယောက်ဟာ တပည့်တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဘို့ ဘယ်လောက် ရှေ့တန်းတင် အားပေးနေလည်းဆိုသော အချက်ပါ၊ အရာရာမှာ ဆရာကိုပဲ ယုံကြည် အားကိုးမှီခိုမူကို အားပေးနေခြင်းဟာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလိုမူစွမ်းအား စိစစ်ဖို့စွမ်းအားတွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်၊ တစ်နေ့ ဆရာမရှိတော့ရင်လည်း အားကိုးရာမဲ့ သလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာ စွမ်းအားတွေကို အစွမ်းထက်လာအောင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူ ကိုယ့်ပေါ်ကိုယ် ယုံကြည်မူတွေကို အစွမ်းထက်လာအောင် ဖေးမပေးနိုင်သူဖြစ်ရမယ် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ တော့ အရှင်အာနန္ဒာကို ဒီလို ဆုံးမထားပါတယ်။
" အာနန္ဒာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အားမကိုးနဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ထာဝရ မတည်ဘူး။ အားကိုးရမှာက ဓမ္မကို အားကိုးရမှာ၊ ဓမ္မသည်သာလျှင် ထာဝရ တည်မြဲနေတာ။ "
" Ananda do not depend on Person, because they do not live forever. You have to depend on Dhamma (depend on yourself), because only Dhamma stays forever."
ကိုးကွယ်သင့်သော ဘာသာ၌ ရှိရမည့်အင်္ဂါများ
၃။ ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့မှု မှ လွတ်ကင်းရမယ်၊
၄။ အခြားဘာသာကို ဖျက်ဆီးခြင်းကင်းရမယ်၊
၅။ အခြားဘာသာများ တရားသဖြင့် တိုးတက်ကြီးပွါးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုရမယ်၊
၆။ မကောင်းမှုကို မပြုမိအောင် စောင့်စည်းပေးနိုင်ရမယ်၊
၇။ စိတ်ကို ကိလေသာမှစင်ကြယ်အောင် ညွှန်ပြနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။
( အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ )
ဒီအချက်အလက်တွေက ကိုယ့်ကို စိစစ်ဖို့အတွက် ပေးတဲ့ အထောက်အကူလေးတွေပါပဲ။
ဆရာတော် ဒေါက်တာဝါပိုလာရာဟုလာ မိန့်ခဲ့တဲ့ ဩဝါဒကလည်း အင်မတန်ကောင်းပါတယ် -
ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ယုံကြည်မှုထက် သိမှုနှင့် ရှုမြင်မှုကိုသာ အဓိကထားသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှု (တရားတော်) များသည် "ဧဟိ ပဿိကော လာလှည့် ရှူလှည့်" ဟုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုသာ
ပြု၍လာပြီး ယုံကြည်လော့ ဟုမဆိုပေ။
Buddhism is not alwaysaquestion of knowing and seeing and not that of believing.
The teaching of the Buddha is qualified as Ehi-Passiko, inviting you to come and see, but not to come and believe.
( Ven. Dr. W. Rahula - What the Buddha Taught )
ဒီအတိုင်းပါပဲ " ဧဟိ ပဿိကော " - နာကြားပါ ဆည်းပူးပါ ပြီးတော့ စိစစ်လက်ခံရမှာပါ။ ဘာသာခြားမှ မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း အမြဲလို နှလုံးတွင်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
ဆရာများ သားသေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆရာမှား သားသေပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ခံတဲ့သူက ဝေဖန် စမ်းစစ်မူ မရှိပဲ အကန်းကြီးလက်ခံရင်တော့
အဲ့ဒါ ကိုယ့်အပြစ်ပါပဲ။ ကိုယ်အလိုက်မှားလို့၊ ကိုယ်လေ့လာ လိုက်စားမူနည်းလို့ပါ၊ ဆရာ့အပြစ်နောက်မှထား သူခံရမှာနောက်မှထား
လောလောဆယ် ကိုယ်မှားကိုယ်ခံ၊ ကိုယ်အမှား ကိုယ်ဝန်ခံပြီး နောက်ထက် မမှားမိအောင် အရာရာအားလုံးကို စဉ်းစဉ်းစားစား စိစစ် လက်ခံသင့်ပေသည်။
ဒါကြောင့် စာပေ များများလိုက်စား၍ ဆရာကောင်း သူတော်ကောင်းတရားတွေ ဆုံးမစကားတွေကို များများနားယူခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးစိစစ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အတွေးအမြင် အယူအစများ မှန်ကန်အောင် မှတ်သား ကျင့်ကြံသင့်ပေသည်။